Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii caawa ka dhacay Cadaado – AfmoNews
Wararkii ugu dambeeyay dagaalkii caawa ka dhacay Cadaado
Waxay faah faahin ka soo baxeysaa iska horimaad kulul oo caawa ka dhacay Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud, kaasoo khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh gaystay.
Iska horimaadkan ayaa u dhaxeeyay Ciidanka NISA iyo maleeshiyaad qaab beeleed u abaabulan, waxaana uu iska horimaadka yimid, ka dib markii maleeshiyadaasi ay weerartay Xarunta Hay’adda NISA, oo ku dhow Madaxtooyada Cadaado.
Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyadaasi ay NISA ka dalbadeen inay u soo sii daayaan nin iyaga ka mida oo xaruntaasi ku xiran, taasoo ay NISA ka hortimid.
Ninkan ka xiran maleeshiyada deegaanka waxaa loo haystaa inuu ku lug lahaa dagaal beeleed bishii hore ka dhacay Gobolka Galgaduud.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in intii uu iska horimaadku socday ay labada dhinac isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoona NISA ay aad isaga caabisay maleeshiyadii weerarka soo qaaday, oo ujeedkoodu uu u muuqday inay xaruntaasi ka soo sii daayaan ninkii kaga xirnaa.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in iska horimaadka uu istaagay, ka dib markii ay dib u gurasho sameeyeen maleeshiyadii deegaanka.
Waxaa iska horimaadkan ku dhintay inta laga warqabo hal qof oo rayid ah, halka mid kalana uu ku dhaawacmay, waxaase suurtagal ah in khasaaraha uu intaa ka bato.
Waxaa socdo dadaalo ay garwadeen ka yihiin Odayaasha Dhaqanka, si looga baaqsado dagaal kale oo ka dhaca Magaalada Cadaado.
Dadka reer Cadaado ayaa aad u hadalhaya dagaalkii caawa ka dhacay magaaladaasi, oo saamayn ku yeeshay isu socodkii dadka, gaadiidka iyo ganacsiga, goobaha qaarkood.